Horse oil set အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Horse Oil Set (3 in 1)
လက်ရှိအသက်ထက် ၁၀ နှစ်ကျော်လောက် အသားအရေမျိူးဖြင့် ပြန်လည်နုပျိူ စေမယ်ဆို ၂၀ ကျော် မမတို့ ၃၀ ကျော် မမတို့. ၄၀ ကျော် မမတို့ စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်တယ်နော် (^_^)
အသားအရေကိုအားဖြည့်စေမယ့် ရေဓာတ်အပြည့်အ၀ပါဝင်ပြီး နုပျိူ မှုကို အသစ်တစ်ဖန် မွေးဖွားစေဖို့ နာမည်ကြီး မြင်းတံဆိပ်မှထက်မံထုတ်လုပ်တဲ့ Horse Oil Set လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ......
ဒီ horse oil set လေးထဲမှာ
တစ်နေကုန်ထိတွေ့နေရသော နေရောင်ခြည်ကြောင့် ညစ်ညမ်းနေသောအသားအရည် ကိုဖယ်ရှာပေးပြီး ဖြူစင်ကြည်လင်သောအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေခြင်း........
ပုံမှန်သုံးပေးခြင်းဖြင့် ၅ ရက်အတွင်း မျက်နှာပေါ်က မှဲ့ခြောက် အမဲစက် တင်းတိတ် အမာရွတ် ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း အသားအရေမွဲခြောက်ခြင်း အဆီပြန်လွန်းခြင်းကို ဖယ်ရှားပျာက်ကင်းစေမယ့် Toner လေး......
3.Milk (day & nigh )
အသားအရေကိုတင်းရင်းစေပြီးအသက် ၂၅ ကျော်လာတာနှင့်အမျှ မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရေးအကြောင်းများကို အထူးသက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ ရေဓာတ်အပြည့်အ၀ ပါရှိခြင်း...........
Horse oil set လေးကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း ထူးခြားမှုလေးကို သင်သတိပြုမိမှာပါ မနက်မိုးလင်း မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့အချိန် ပြောင်းလဲသွားမယ့် မျက်နှာကြည်ကြည်လေးကို သင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာပါ ヅ ヅ ヅ
အထက်အရာရှိကိုပဲ လက်ဆောင်ပေးမလား သင်ကိုယ်တိုင်ပဲသုံးမလား အိမ်ကမေမေကိုပဲ နုပျိူခြင်းတွေနဲ့ ဖန်ဆင်းကျေးဇူးဆပ်မလား ဘူးလှလှနဲ့မို့ အမြင်လဲအမတန်လှပါတယ်
1 set မှာ ၃ ဘူးပါလို့ ​ပေးဝယ်ရတာ တစ်ဘူးမှ ဘယ်လောက်မှမကျဘူးနော် ပြီးတော့ အကြာကြီးအသုံးခံလို့. Order လေးမြန်မြန်တင်စို့နော် ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
အမည်: Horse oil set